सुर्य नेपाल वेष्टर्न ओपन गल्फ शुरु, तोडिएला शिवरामको रेकर्ड ! - Kheladi News Kheladi News
सुर्य नेपाल वेष्टर्न ओपन गल्फ शुरु, तोडिएला शिवरामको रेकर्ड !
पोखरा(खेलाडी न्युज)—पोखरामा आजदेखि सुर्य नेपाल वेष्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिता शुरु भएको छ । नेपालका व्यवसायिक गल्फरले १८ औं सस्करणको वेष्टर्न ओपनमा विभिन्न गल्फकोर्षका व्यवसायिक गल्फरले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् ।
पोखराको छिनेडाडाँस्थित हिमालयन गल्फकोर्षमा २६ व्यवसायिक(प्रो)गल्फरको प्रतिस्पर्धा छ । प्रतियोगितामा १८ जना एमेच्योरले सहभागिता जनाएको हिमालयन गल्फ कोर्षका व्यवस्थापक भुवन गुरुङले जानकारी दिए । प्रतिस्पर्धामा पोखराका तीन व्यवसायिक र पाँच एमेच्योर गल्फरले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । प्रो तर्फ भुवन गुरुङ, कमल तामाङ, सन्जीव नेपालीको सहभागिता रहेको छ ।
गोकर्ण गल्फ काठमाडौं,, त्रिभवन आर्मी गल्फ काठमाडौं, निर्वाणा गल्फ कोर्ष धरान, रोयल नेपाल गल्फकोर्ष काठमाडौं र हिमालयन गल्फ कोर्ष पोखराका गल्फरले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सन १९९९ बाट शुरु भएको प्रतियोगिताको १८ औं सस्करणमा पुर्व विजेताहरुले उपाधि रक्षाको लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । शनिबार प्रो—एमको प्रतिस्पर्धा हुने उनलेजानकारी दिए । साढे ६ लाख पुरस्कार राशी रहेको सुर्य नेपाल वेष्टर्न ओपन विजेताले १ लाख १५ हजार नगदसहित ट्रफी पाउने छ । दोस्रो हुनेले ८५ हजार रुपैयाँ पाउने छ । २१ औं स्थानसम्म आउने गल्फरले नगद पुरस्कारको हकदार बन्ने छ ।
गत वर्षको संस्करण शिवराम श्रेष्ठले जितेका थिए । उनले वेष्टर्न ओपनमा उत्कृष्ठ प्रदर्शन गर्दै करियरको ३३ औं उपाधि जित्दा ९ अण्डर २०१ को स्कोरकार्ड बनाउँदै च्याम्पियन बनेका थिए । उमेश नगरकोटी उपविजेताको रुपमा चिक्त बुझाउँदा इभान पार खेलेका थिए ।